ဗာ၊ ဗြိတိသျှတို့၏ ဦး တည်ရာ ခရီးသွားသတင်း
Mariela Carril | | အင်္ဂလန်နိုင်ငံ, ကြည့်ဖို့ဘာလဲ
သင်အားဖြင့်ဝတ္ထုကြိုက်လျှင် ဂျိန်း Austen ဒါမှမဟုတ် ၁၉ ရာစုမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အင်္ဂလိပ်ရုပ်ရှင်တစ်ခုခုကိုခင်ဗျားတို့ကြားဖူးမှာပါ ရေချိုးကန်။ ဟုတ်ပါတယ်, ထိုကာလ၏အင်္ဂလိပ်အထက်လူတန်းစားများ၏ spa နီးပါး Alma mater မီးခိုးခေါင်းတိုင်များမပါဘဲစက်မှုလုပ်ငန်းတစ်ခုအနေနှင့်နောက်ပိုင်းတွင်ပေါ်ပေါက်လာမည့်ခရီးသွားလုပ်ငန်းအကြောင်း။
မင်းလည်းသိလား ရေချိုးသည်ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်နေရာဖြစ်သည်? ဟုတ်တယ်၊ ၁၈ ရာစုကအင်္ဂလိပ်စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်အကြီးစားအခန်းကဏ္ occup အပြင်နှစ်တစ်ထောင်သမိုင်းလည်းရှိတယ်။ ဒါကြောင့်သင်မြင်တဲ့အတိုင်းပဲမြို့ထဲမှာကျက်သရေတစ်ခုထက်ပိုပါတယ်။ ဆိုလိုတာကတိုင်းပြည်အတွင်းမှာရှိနေခြင်းဟာလမ်းလျှောက်ပြီးကြည့်ရှုရမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်တယ်။
ရေချိုးကန် အေဒီ ၁ ရာစုတွင်ရောမအင်ပါယာမှတည်ထောင်ခဲ့သည် ထို့နောက်သူသည်အင်္ဂလိပ်ချန်နယ်ကိုဖြတ်ကူးနိုင်ခဲ့သည် ပူပြင်းပြီးသဘာဝဒေသများကအမှန်တကယ်တည်ရှိပြီးဖြစ်သော်လည်း၎င်းသည်အဟောင်းကိုဖြစ်စေသည်n ကြေးဝါခေတ်ကမြေယာများကိုသိမ်းပိုက်ခဲ့သည်.
တကယ်တော့လက်ရှိ Solsbury Hill အပေါ်စီးကုန်းမြင့်နေသည့်တောင်ကုန်းကိုရှေးဟောင်းသုတေသနတူးဖော်ခြင်းများကြောင့်ခံတပ်နှင့်အခြားအဆောက်အအုံများကိုလူသိများခဲ့သည်။ ရောမတို့သည်သန့်ရှင်းရာဌာနအချို့ကိုအသုံးချပုံရသည် aggiornaron သူ့ကိုယ်ပိုင်အစွန်းရောက်ရန်။ ထို့ကြောင့် Sulis နတ်ဘုရားမထံအပ်နှံထားသည့်နတ်ကွန်းကို Minerva ထံအပ်နှံခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်းရာစုနှစ်များအတွင်းအပူရှုပ်ထွေးသောအဆောက်အအုံ၏အဆောက်အအုံများပုံသဏ္ဌာန်ပြောင်းလဲသွားသည်။
ပြီးသားရာစုအတွက် ဒုတိယအေဒီ တစ် ဦး ရောမရေချိုး၏ပုံမှန်အဆောက်အ ဦ များထင်ရှား: ကယ်လိုရီအဆိုပါ tepidarium နှင့် frigidarium။ အပြန်အလှန်အားဖြင့်ရှေးခေတ်ရောမမြို့သည်ခံတပ်နံရံများဖြင့်ဝိုင်းရံထားသော်လည်းနောက်ဆုံးတွင် ပဉ္စမရာစုသို့အင်ပါယာကျဆုံးခြင်းနှင့်အတူအရာအားလုံးသည်မအောင်မြင်ခဲ့ပါ။ ကိုးရာစုတွင်ရောမလူမျိုးတို့၏မြို့ပြပုံစံသည်ပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ပြီးမြေများမှာတော်ဝင်ပိုင်ဆိုင်မှုများဖြစ်သည်။
အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှမြို့တစ် Abbey ၏ကာကွယ်မှုအောက်မှာကြီးပွားသတည်း။ ရေပူစမ်းများပတ်ပတ်လည်တွင်ရေပူစမ်းအသစ်များတည်ဆောက်ခဲ့ပြီးနောက်နိုင်ငံတော်သည်နိုင်ငံရေးသမိုင်း၏အတက်အကျများကိုတွေ့ကြုံခဲ့သည်။ မြို့၏areasရိယာအတော်များများကိုစတူးဝပ်ကာလတွင်တည်ဆောက်ခဲ့ပြီးဂျော်ဂျီယာခေတ်တွင်တူညီခဲ့သည်။visitors ည့်သည်အရေအတွက်တိုးများလာသောအခါဖြစ်ခဲ့သည်။ ဤကာလအတိအကျမှာ Jane Austen ၏ဝတ္ထုများတွင်ထင်ဟပ်ဖော်ပြသည်။
ရေချိုးကန် avalon ၏ချိုင့်၌တည်ရှိ၏တောင်ကုန်းများကဝိုင်းရံထားသည်။ ပုံမှန်အားဖြင့်ပုံမှန်မဟုတ်သောမြစ်များ၊ ရေလွှမ်းမိုးမှုများနှင့်ရေလွှမ်းမိုးမှုများနှင့်ရေကန်များပြည့်နှက်နေသောမြစ်ကိုတစ်ခုတည်းသောလမ်းကြောင်းတစ်ခုသို့ပို့ဆောင်ခဲ့ပြီး ၂၀ ရာစု ၇၀ ပြည့်နှစ်တွင်ရေကြီးမှုပြproblemsနာများအဆုံးသတ်ခဲ့သည်။
ရေပူ, စမ်းရေပေါက်များသည် Mendip တောင်ကုန်းများမှပေါ်ထွက်လာခြင်းဖြစ်သည်။ ၄ င်းတို့သည်အမှန်တကယ်အားဖြင့်ကမ္ဘာမြေကိုမိုးရွာစေပြီး ၂၅၀၀ မီတာအထက်ရှိသောမြေအောက်ရေအောင်းလွှာများသို့တိုက်ရိုက်စီးဆင်းသည်။ အဲဒီမှာဘူမိအပူစွမ်းအင်ကြောင့်ရေရဲ့အပူချိန်က ၆၀ ကနေ ၉၆ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထိမြင့်တက်တယ်။ ဖိအားများအောက်တွင်ရေသည်မျက်နှာပြင်ပေါ်တက်ပြီးထုံးကျောက်ရှိအက်ကြောင်းများကြားတွင်ခုန်ချကာခရီးသွားလုပ်ငန်းသည်အသုံးပြုသည်။
ရေချိုးသည်တိုင်းပြည်၏အခြားဒေသများထက်ရာသီဥတုပိုမိုပျော့ပြောင်းသည် မိုးတွေရွာတယ်။ သူကတွက်ချက်သည်နွေရာသီတွင် ၂၁ ံစင်တီဂရိတ်ခန့်ရှိသည်။ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပတ် ၀ န်းကျင်ပတ် ၀ န်းကျင်နှင့် ၁၉၅၀ ပြည့်လွန်နှစ်များတွင်ရေးဆွဲခဲ့သောအစိမ်းရောင်ခါးပတ်ကြောင့်တစိတ်တပိုင်း။ ဤအရာအားလုံးသည်ခရီးသွားလုပ်ငန်းသည်မြို့၏အဓိကအင်ဂျင်အဖြစ်ဆက်လက်တည်ရှိနေခြင်းကိုအထောက်အကူပြုသည်။
Bath မှာဘာလုပ်လို့ရလဲ ကောင်းပြီ, သံသယမရှိဘဲ, ပထမ ဦး ဆုံးကိုငါသိ၏ ရှေးဟောင်းသုတေသနအပျက်အယွင်း ဒါကအလယ်ဗဟိုပါ။ The အဟောင်းကိုရောမဗတ် ၎င်းတို့သည်လက်ရှိမြေပြင်အောက်တွင်ရှိပြီးတိုင်များနှင့်အုတ်မြစ်ဟောင်းများရှိသည်။ ပြီးတော့အဲဒီမှာရှိတယ် ရေချိုး Abbey ၎င်းသည်အဟောင်းဖြစ်သော်လည်း ၁၆ ရာစုမှအဆောက်အ ဦး တစ်ခုရှိပြီးအလွန်လှပသည်။
များစွာသော အဆောက်အ ဦး များသည် ၁၈ နှင့် ၁၉ ရာစုနှစ်များမှဖြစ်သည် နှင့်ဒေသခံကျောက်တုံးတွင်တည်ဆောက်ရှင်းလင်းသောမျက်နှာစာများနှင့်အတူဂျြောဂြီယနျစတိုင်, ကြီးစိုး။ ယနေ့ခေတ်တွင်ဤအိမ်များသည်ဟိုတယ်များဖြစ်သောကြောင့် Bath ဘဝကိုအမှန်တကယ်တွေ့ကြုံခံစားရန်ညအချိန်တွင်နေသင့်သည်။ ဒါမှမဟုတ်မင်းရဲ့အတိတ်။
ဆပ်ကပ် ဒါဟာဗာအတွက် ဦး တည်ရာဖြစ်ပါတယ်။ အကြောင်းဖြစ်သည် ကွေးကျန်ကြွင်းသောအရပ် လှုပ်ရှားမှုများသို့မဟုတ်ဂိမ်းများအတွက်အသုံးပြုသောပွင့်လင်းမြို့ပတ်ရထားအာကာသမှပုံသဏ္giveာန်ပေးကြောင်းဂျွန်ဝုဒ်ကဒီဇိုင်း။ လေထဲမှလေယာဉ်တစ်စင်းသည်ရောမမြို့ရှိ Colosseum တွင်ရုပ်ပုံသုံးခုနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောဗိသုကာပုံစံတစ်ခုစီရှိသည်။ ကော်လံများတွင် Ionic, Doric နှင့် Corinthian တို့ဖြစ်သည်။ ဤအကျန်ကြွင်းသောအရပ်၏အများဆုံးဒီကဗျာဖြစ်ပါတယ် တော်ဝင်လခြမ်း ဆယ်ရှစ်နှစ်ရာစု၏ဒုတိယတစ်ဝက်မှချိန်းတွေ့ပေမယ့်အခြားအလွန်လှပဖြစ်ကြသည် Somerset Pace o Lansdown လခြမ်း။
Avon မြစ်တစ်လျှောက်တွင်ဂန္တဝင်တံတားတစ်ခုရှိသည် Pulteney တံတား။ ၎င်းတွင်စီးပွားဖြစ် Arcade များရှိပြီး Florence ရှိကျော်ကြားသော Ponte Vecchio နှင့်ဆင်တူသဖြင့်၎င်းသည်၎င်း၏ဆောက်လုပ်ရေး မှစ၍ ပြောင်းလဲခြင်းမရှိသလောက်ဖြစ်သည်။ စုပ်စက် ဂျော်ဂျီယာနိုင်ငံ၏လမ်းများ၊ မြို့တော်ပြဇာတ်ရုံများ အဲဒီမှာငါးယောက်ရှိတယ်၊ သူတို့အားလုံးဟာသူတို့ရဲ့ကျော်ကြားမှုတွေပါ ပြတိုက်...
သင်မြင်သည်အတိုင်း, ဗာတွင်တစ်ရက်တည်းသည်မလုံလောက်ပါ။ ဘတ်စ်ကားစီးခြင်း၊ လမ်းလျှောက်ခြင်းနှင့်ရေချိုးခြင်းတို့ပြုလုပ်သည်။ အရာအားလုံးကကျိုးနပ်သည်။ အမှန်မှာဗာသည်တူးမြောင်းများဖြင့်ဝိုင်းရံထားပြီးလှေဖြင့်စူးစမ်းနိုင်သည်၊ နာရီပေါင်းများစွာစီးနင်းနိုင်သည်၊ ပျော်ပွဲစားခြင်းတောင်းနှင့်အတူသင်ဘတ်amptonသို့သွားနိုင်သည်။ အကယ်၍ သင်သူငယ်ချင်းများနှင့်အတူခရီးသွားမည်ဆိုလျှင်သင်သည်ပိုကြီးသောလှေကိုငှား။ ကိုယ်တိုင်လေ့လာစူးစမ်းနိုင်သည်သို့မဟုတ်စားသောက်နိုင်သည် မြို့ထဲမှာသာရေပေါ်စားသောက်ဆိုင်ဂျွန် Rennie ။
ဂန္တွင်ဘတ်စကားစီးသည် ခုန်ကျော်ခုန်။ သင်သည်ဝေးလံသောလမ်းလျှောက်စရာမလိုဘဲနှင့်အထင်ကရဖြစ်သော Bath ရှိသည့်နေရာများသို့သွားရောက်လည်ပတ်နိုင်ပြီး၊ သင်္ဘောပေါ်တွင်ဗြိတိသျှသမိုင်းကိုအသက်သာဆုံးနည်းဖြင့်သင်လေ့လာနိုင်သည်။ တောင်မှ အဖြစ်ဝေး Stonehenge, Glastonbury, Cotswolds အဖြစ်သွားသောခရီးရှိပါတယ်။..
ပြီးတော့သိသာထင်ရှားတဲ့ Bath ကအရမ်းစမ်းရေ ၏အားသာချက်ယူပူစမ်းနှင့် spa ရှိပါတယ်။ ခေတ်သစ်ရေချိုးခန်းများဖြစ်ကြသည် Thermae ရေချိုး Spa, ကျန်ကြွင်းသောအရပ်ပေါ်မှာရေကူးကန်နှင့်စိတ်နှင့်ကိုယ်ခန္ဓာကိုဖြေလျော့ပေးန်ဆောင်မှုနှင့်အတူ။ ကျန်ကြွင်းသောအရပ်မှမြင်ကွင်းများသည်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသော်လည်းကုသမှုပေါင်း ၄၀ အကြားကိုလည်းရွေးချယ်နိုင်သည်။ ဆက်သွယ်ဖို့မလိုပါဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ၂ နာရီလောက်ပဲကုန်ကျနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် ၄၀ ပေါင်စျေးနှုန်း။ ဤကမ်းလှမ်းချက်မှာများပြားလှပါသည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ဤသည်မှာ spas နှင့်ကုသမှုများကိုပေးသောတစ်ခုတည်းသောဟိုတယ်မဟုတ်ပါ။
နောက်ဆုံးတော့ဗာသည်ရောမရေချိုးကန်များနှင့်ခေတ်သစ်ရေချိုးစက်များနှင့်ထပ်တူထပ်မျှဖြစ်သည်။ ဂျိန်း Austen နှင့်အတူပြောရလျှင်ဖြစ်ပါတယ်။ စာရေးသူသည်ဤနေရာတွင် ၁၈၀၁ နှင့် ၁၈၀၆ အကြားနေထိုင်ခဲ့သည်။ သူမသည်သူမ၏ဝတ္ထုများကို ဖြတ်၍ သူမ၏ခြေရာကိုလိုက်လျှောက်နိုင်သည်။ အဲဒီမှာ ဂျိန်း Austen စင်တာ ပြီးတော့လည်းရှိပါတယ် ဂျိန်း Austen ပွဲတော် နှင့် Tငါတို့ဂျိန်း Austen အရာစပျစ်သီးကိုအဝတ်အစားများပါဝင်သည်။ ကိုယ်သေတော့မယ်! ဒါကြောင့်အင်္ဂလန်ကိုသွားရင် Bath လှည့်ပါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခရီးသွားသတင်း » Getaways ဥရောပ » အင်္ဂလန်နိုင်ငံ » ဗာ, ဗြိတိသျှအလွန် ဦး တည်ရာ